२० ब्वायफ्रेण्डका आइफोन बेचेर युवतीले किनिन् घर ! – Kavrepati
Home / रोचक / २० ब्वायफ्रेण्डका आइफोन बेचेर युवतीले किनिन् घर !
admin August 31, 2021	रोचक Leaveacomment 120 Views
चीनमा हालै यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । जसमा एक युवतीले घर किन्नका लागि एक दुई होइन २० जना ब्वायफ्रेण्ड बनाइन् । एक पछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ केटाहरुसँग प्रेमको नाटक रची सबैसँग आइफोन सेभेन फुत्काउन सफल भइन् ।
आफ्ना सबै २० ब्वायफ्रेण्डसँगबाट गरी २० वटा आइफोन हात पार्न सफल भएकी ती युवती अन्ततः एकसाथ सबै केटाहरुलाई जिल्ल पार्दै छाडिन् ।
Previous मोटरसाइकल र गाडीको ट्रायल दिनेहरुलाई खुसीको खवर, भर्खरै आयो यस्तो सुचना
Next आज १६ भदौ २०७८, बुधवार : आजको राशिफल